people Nepal » आजको राशिफल : मंसिर १२ गते / नोभेम्बर २८ तारिख मंगलबार आजको राशिफल : मंसिर १२ गते / नोभेम्बर २८ तारिख मंगलबार – people Nepal
आजको राशिफल : मंसिर १२ गते / नोभेम्बर २८ तारिख मंगलबार
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल मार्गशिर्ष १२ गते मंगलबार इश्वी सन २०१७ नोभेम्बर २८ तारीख मार्गशिर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथी चन्द्रमा कुम्भ राशिमा प्रातः०७ः०५ बजे सम्म पश्चात मिन राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु कीर्तिपुरमा ईन्द्रायणीयात्रा –
बाणीका कारण सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्रजनको साथ सहयोमा कमि महसुस हुनेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित गरेको खण्डमा सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेको छ । आम्दानिका तुलनामा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । जिवन साथी सगँ सामान्य मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ ।
मित्रजनको साथसहयोग द्वारा नयाँकार्यको थालनिको सम्भावना रहेको छ । अनुसन्धानात्मक कार्यमा समय ब्यतित गरेमा उत्तम रहनेछ । बिद्यार्थी वर्गकानिम्ती समय मध्यम रहेको छ । मानसिक चिन्ता रहेतापनि आम्दानि क्षेत्रभने सबल रहनेछ । जिवनसाथीको सहयोगमा प्रतिपक्क्षी परास्त रहनेछन ।
मान्यजनसगँको सम्बन्ध प्रगाड बन्नेछ । ब्यापारब्यवसायमा भने सजग रहनु उत्तम रहनेछ । तपाईको प्रगतिमा आरीस गर्नेहरुको सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । कार्यसम्पादनमा लगाईएको लगनसिलताको कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने योग रहेको छ ।
मान्यजनको साथसहयोमा कार्य सम्पादनमा मद्धत पुग्नेछ । प्रिय खवरले मन हर्शीत तुल्याउला । आम्दानि मध्यम रहेतापनि स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको योग रहेकोछ ।सबारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनुपर्ने समय रहेकोछ । शत्रु परास्त्र हुनेछन ।
तपाईको कामको फाईदा अरुलाई मिल्नेछ । मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ ।
भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसाघात हुन सक्छ । खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ ।
साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । तपाईका शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ भने शत्रुपक्क्ष कमजोर हुनाले बिघ्नबाधाहरु हट्नेछन् । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ ।
रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ । सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । अधिकआत्म बिश्वासका कारण चाडो क्रोधको सिकार भईनेछ । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । यात्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ ।
खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । ब्यापार ब्यबसायमा रामा्रे समय रहेको छ । प्रिय ब्यक्तिहरु टाढीन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । पारीवारीक शुख प्राप्त रहनेछ । मेहेनत को रामा्रे फल प्राप्त हु्नेछ ।साजेदारीकार्य बाट बिशेष लाभ मिल्नेछ ।
ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । पराक्रम बृद्धि हुने छ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला ।सामान्य यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ ।
दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् । खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ ।
शारिरिक आलस्यता ले सताउन सक्छ । आम्दनी बृद्वि हुने योग रहेको छ । मनमा सामन्य चिन्ता ले सताउने छ । साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ ।साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहने छ । सामान्य यात्राले मन बैचैन रहला ।